Torohevitra Marketing amin'ny finday 15 handefasana varotra bebe kokoa | Martech Zone
Torohevitra Marketing amin'ny finday 15 handefasana varotra bebe kokoa
Talata, Jolay 31, 2018 Talata, Jolay 31, 2018 Chris Richardson
Ao amin'ny tsena mpifaninana izaitsizy ankehitriny, zavatra iray no azo antoka: ny fanandramana amin'ny varotra an-tserasera dia tsy maintsy ahitana tetikady marketing finday, fa raha tsy izany dia tsy hahita hetsika maro ianao!
Betsaka ny olona ankehitriny no andevozin'ny findainy, mazàna satria efa zatra ny fantsona media sosialy, ny fahaizana mifandray amin'ny hafa avy hatrany, ary koa amin'ny filàna "mijanona amin'ny hafainganam-pandeha" amin'ny zava-dehibe na tsy dia misy dikany .
As Milly Marks, manam-pahaizana amin'ny Taratasy fikarohana EssayGeeks.co.uk soso-kevitra mamirapiratra hoe: "Ireo orinasa amina miliara dolara dia efa nanaiky ny filana manatsara ny tranokalan'izy ireo, ny atiny, ny paikadiny varotra ho an'ireo mpampiasa finday. Mino aho fa toy izany koa ianao, mba hahazoana antoka fa tsy hianjera amin'ny dihin'ny tsena ianao! ”
Amin'ity lahatsoratra androany ity dia mizara torohevitra marketing finday 15 izahay hampirisihana ny fitomboan'ny varotra ny tranonkalanao. Tandremo ary ampiharo.
Ataovy namana-finday ny tranokalanao - Mazava ho azy ity iray ity. Ny dingana voalohany amin'ny varotra finday dia ny fananana tranokala miasa azo aseho tsara amin'ny efijery finday. Afaka mahita be dia be ianao torohevitra fanatsarana finday fototra voasoratra ato amin'ity lahatsoratra ity.
Mamolavola atiny voaatsara ho an'ny finday - Ny atiny voavolavola amin'ny finday dia atiny tsotra izay toa tsara amin'ny finday. Ohatra, tsy tokony hanoratra andian-tsoratra ianao, fa tokony hosarahinao ireo fehintsoratrao ary ataovy fohy ny fehezanteny. Ampiasao ny endritsoratra mety ary azonao antoka fa manolotra singa hita maso ampy ianao mba hitazomana ny mpampiasa findainao hirotsaka.
Mianara hampiroborobo ny marikao amin'ny doka finday - Ny tambajotra sosialy dia manolotra tombony amin'ny dokambarotra mahavariana ho an'izay sahy manandrana azy. Azonao atao ny manatsara ny fanentanana Facebook, Instagram, Google, Youtube, Snapchat araka izay itiavanao azy, miorina amin'ny demografika, efijery telefaona, toerana, sns. Ity a mpitari-dalana mafy orina amin'ny famolavolana fampielezan-kevitra amin'ny finday mahomby.
Ampiasao ny Google My Business hahazoana toerana eo an-toerana - Raha manana orinasa eo an-toerana ianao dia aleo tsy mandingana ny “Google My Business.” Ity fampiasa ity dia mampifandray ny orinasa kely eo an-toerana amin'ny tamba-jotra Google, mamoaka ny antsipirihanao sy ny toerana misy anao an-tserasera, ary mitarika ny mpanjifa liana mahitsy ho eo am-baravaranao. Isaky ny mikaroka valiny eo an-toerana ny mpampiasa finday (“trano fisakafoanana tsara indrindra eo akaikiko,” “gym eo akaikiko,” “akanjo an-tanana any Chicago”), Google dia mety hampiseho ny orinasanao amin'ny widget asongadiny (mialoha ny valin'ny voajanahary # 1. )
Amporisiho ny mpankafy anao hiditra avy ao amin'ny toerana misy anao - Raha manana orinasa eo an-toerana ianao dia tokony hamporisika ny mpanjifanao sy ny mpanjifanao hanamarina amin'ny alàlan'ny serivisy toa ny Foursquare, Where, na Gowalla. Ity hetsika tsotra ity dia hitarika amin'ny fanatsarana ny marika.
Mampiasà lamina finday ho an'ny fampielezana mailaka mailaka - Raha miditra amin'ny marketing mailaka ianao dia tokony hanatsara hatrany ny mailakao ho an'ny mpamaky finday. Mba hahatonga ny raharaha ho sarotra kokoa, dia tokony hampiasa maodelim-mailaka izay efa noforonina tao an-tsaina ny zavatra niainan'ny mpampiasa finday. Raha tsy izany dia tokony hianaranao ny mandanjalanja ny haben'ny lahatsoratra sy ny sary ary ny toerana misy anao (amin'ny ankapobeny dia mamadika ny mailakao mahazatra ho pejy mamaly finday).
Andramo ny marketing amin'ny SMS / MMS - Mpivarotra maro no matahotra ny fitsipiky ny marketing amin'ny SMS / MMS. Mamelà ahy hiteny aminao fa angano ny ankamaroan'ny tantara. Misy orinasa voamarina afaka manampy anao hanao dokambarotra ny vokatrao / serivisinao amina mpanjifa mety liana an'arivony. Mazava ho azy fa amin'ny alàlan'ny SMS na MMS ny fifandraisana.
Fantaro ny tanjon'ny mpampiasa anao - Eritrereto ny zavatra tian'ny mpanjifanao mitady azy raha hitsidika ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny finday izy. Soraty ny tanjona ary andramo indroa (mampiasa analytics). Miaraka amin'ny fanarahana tsy tapaka, ho hitanao ny tokony hodidin'ny pejin-tranonkalanao.
Amporisiho ny fijoroana ho vavolombelona - Vitsy dia vitsy ny mpanjifa no hieritreritra hoe “Hey, tokony avelako hojerena ity toerana / tranonkala ity.” Tsia, manaraka ny orinasany manokana izy ireo, noho izany dia tsy maintsy manelingelina azy ireo ianao ary manontany mivantana ny valiny (raha ilaina izany) Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny pop-up, hafatra mivantana, na amin'ny alàlan'ny mailaka. Hamarino tsara fa mamorona endrika milamina sy tsotra ampiasaina amin'ny finday ianao ary tsy mila fotoana be loatra ny fanadihadiana na fanadihadiana ataonao. Na dia mitondra ny telefaona findainy aza ny ankamaroan'ny olona dia vitsy dia vitsy no hanolo-tena hanao fanadihadiana mihoatra ny 5 minitra.
Manolora fidirana haingana amin'ny alàlan'ny kaody QR - Kaywa dia sehatra iray manampy anao hamorona sy hanaingo ireo kaody QR amin'ny orinasanao. Ireo kaody ireo dia mitahiry fampahalalana betsaka (mitokana) ary mamela ny mpanjifanao hamokatra fifanakalozana haingana sy azo antoka kokoa amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny findainy.
Mamorona ny fampiharana findainao - Azonao atao ny manafaingana ny fahombiazan'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fampivelarana fampiharana finday ilaina izay afaka manompo ny mpanjifanao sy ny mpanjifanao ho avy amin'ny fiezahany hiatrika ireo vokatrao sy serivisinao. Ohatra, tsy afaka nanao an'io i Uber raha tsy nisy fampiharana. Raha tsy mila fampiharana ianao dia aza misahirana mandany ny teti-bolanao!
Araho ny fihetsiky ny mpampiasa anao - Ny traikefa amin'ny finday lehibe dia tsy azo atao raha tsy efa vita ny fanandramana sy ny fanarahan-dia ilaina. Betsaka ny fitaovana fanaovana fikarohana finday ilaina eto, koa alao antoka fa hahafantatra ny sasany amin'izy ireo ianao. Raha vantany vao mahita vahaolana mifanaraka amin'ny orinasanao ianao dia hadihadio hatrany ny valiny ary tandremo izay mandeha ary hadinoy izay tsy mandeha.
Mampiasà karazana fampielezana haino aman-jery maro kokoa - Raha ny tokony ho izy dia tokony hiezaka ny hahay handanjalanja ianao rehefa mandefa atiny. Ampitahao izy ity - mamorona lahatsoratra bilaogy, horonan-tsary, podcast, infografika, sary, ary izay rehetra inoanao fa tian'ireo mpanjifanao. Aza miraikitra amin'ny karazana atiny iray fotsiny - mankasitraka ny fahasamihafana ny olona, ​​ka alao antoka fa omenao azy ireo izany.
Aza atao ambanin-javatra ny fifamoivoizana PC - Tena zava-dehibe ny fifamoivoizana amin'ny finday amin'izao fotoana izao izao. Na izany aza, tokony ho tadidinao fa ireo mpampiasa birao dia mety ho mpanjifa mety koa, ka tokony hiezaka ianao handanjalanja eo anelanelan'ny fanatsarana. Tadidio ihany koa fa ny mpampiasa finday dia miavaka kokoa rehefa mikaroka izy ireo raha toa ka mila manokana fotoana hikarohana lohahevitra midadasika kokoa ireo mpampiasa birao izay hanampy azy ireo hanenjana ny fikarohana.
Ampirisiho ny fifamoivoizanao hirotsaka sy hizara - Omeo fotoana ny mpampiasa anao hizara sy hanome hevitra momba ny hafatrao, na inona na inona. Ny kinovan'ny tranokalanao dia tokony hanondro ny bokotra "Share" na "Follow" izay mifanaraka amin'ny fantsom-piarahamonina misy ny orinasanao.
Fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny finday
Diniho ireto torohevitra ireto ary ampiasao am-pahendrena izany amin'ny fanandramana fanatsarana findainao. Aza adino ny mandray andraikitra, raha tsy izany dia nanaporofo fa tsy misy ilana azy ity famakiana ity lahatsoratra ity!
Tags: fisavana tranojereo-ingoogle ny orinasakofinday eo an-toeranaMMSdoka findaydokam-barotra findaynamana mahafinaritrafinday-barotratoro-hevitra amin'ny marketing amin'ny findayfinday novainaatiny voavolavola findaymailaka mahasoa amin'ny findayfisehosehoana ho an'ny findaySMSfijoroana vavolombelonamarketing amin'ny lahatsoratrampampiasa
Chris dia mpanao gazety, mpamoaka lahatsoratra ary bilaogera. Tiany ny manoratra sy mivezivezy, mahita ny aingam-panahiny amin'ny fanaovana zavatra vaovao sy mamorona.
Inona avy ireo karazana antso 5 tokony hatao?
Fomba azo antoka dimy hampisondrotana ny fiovam-ponao amin'ny media sosialy